Tranga COVID-19 roa voamarina; mandray fepetra i Trinidad & Tobago · Global Voices teny Malagasy
Lehilahy roa nivahiny tany ivelany no nitondra ireo tranga ireo
Voadika ny 15 Marsa 2020 7:49 GMT
Fanehoana amin'ny endrika 3D ny SARS-CoV-2— fantatra ihany koa amin'ny hoe 2019-nCoV, ilay viriosy miteraka ny valanaretina COVID-19. Sary an'ny NIAID ao amin'ny flickr, CC BY 2.0.
Ny 12 Martsa 2020, nohamafisin'ny minisitry ny fahasalamàna ao Trinidad sy Tobago, Terrence Deyalsingh, nandritra ny antsafa maika nataony ho an'ny mpanao gazety fa nahitan'ireo tomponandraikitry ny fahasalamana tranganà COVID-19 ao amin'ny firenena tranga.
Ilay marary, izay mipetraka ao Trinidad sy Tobago, dia vao avy tafaverina avy any Soisa, fotoana nanahatsapàny ho tsy netinety, ary nandraisany fepetra nanoka-monina ny tenany. Avy eo izy nafindra ho any amin'ny Caura Hospital, izay mitsabo manokana ny resaka aretin'ny taova fisefoana. Tsy nisy nahitàna soritraretina, na hoe nitondra ilay viriosy kosa ireo tao amin'ny ankohonany.
Na izany aza, taorian'ny namoahan'ny mpiandraikitra voalohany ny sekoly ambaratonga fototra iray ao amin'ny Seranan'i Espaina, Maria Regina, ny fanambaràna iray nilaza fa voamarin'ireo tomponandraikitry ny fahasalamana hoe “mitondra ny valanaretina Coronavirus ny ray aman-drenin'ny ny iray amin'ireo mpianatra ao aminy [sic]”, tsy hoe fotsiny nikatona ilay sekoly, fa betsaka koa ireo nanaraka ny diany, isan'izany ny Maple Leaf International School, izay ny ramatoa iray mpampianatra ao aminy dia tsy hafa fa vadin'ilay kapiteny nanamory ny sidina iray an'ny Caribbean Airlines nankany Guyana, izay voalaza fa nitondra vehivavy iray tratr'ilay valanaretina. Namoy ny ainy taty aoriana kelin'izay io mpandeha io.
Nandritra ny fivorian'ny parlemanta tamin'ny 13 Martsa, nambaran'ny praiminisitra, Keith Rowley, fa ety am-panombohana dia hakatona mandritra ny herinandro aloha ny sekoly rehetra manerana ny firenena — tafiditra amin'izany koa ireo sekoly ambony — aorian'izay ny governemanta dia hamerina hijery ny toedraharaha. Tamin'io fotoana io ihany, naterin'ny ministeran'ny fahasalamana ho any amin'ny Caribbean Public Health Agency (CARPHA) ny santionany 63 mba hatao fitsirihana sao sanatria misy COVID-19, iray ihany no voamarina fa tratra.
Noraisin'ny governemanta ihany koa ny fanapahankevitra hanakana ny fahatongavan'ireo sambo mpitondra mpizahatany mandritra ireo vanimpotoana sisa tavela ho an'ny 2019-2020, izay amin'ny ankapobeny dia manomboka ny Novambra ary mifarana ny Aprily. Ny mibahana ao an-tsaina dia ny hoe mbola ho ratsy lavitra ny fahavoazana ara-toekarena ateraky ny fidiran'ilay valanaretina COVID-19 noho ny fatiantoka ateraky ny vola tsy miditra avy amin'ny fizahantany mandritra io vanimpotoana io. Fepetra tsy misy hafa amin'izany no efa noraisina ihany koa ao Jamaika.
Ary na nampitandrina aza ny Praiminisitra Rowley mba tsy handairan'ny hotakotaka, sy niantso ny vahoaka mba ho tony sy tsy hanely vaovao diso, marobe ireo toerana vaventy fivarotana no naharaisana tatitra milaza fanangonana vatsy. Tao amin'ny WhatsApp, ireo mpampiasa ny media sôsialy dia nizara saripika sy lahatsary maneho ny fividianana anaty saritaka any anatin'ireo fivarotana entamadinika sy farmasia tototra olona, maro tamin'izy ireny no lany tahiry tamin'ireo vokatra toy ny fanafody fanasàna tànana sy ny taratasy fifirana.
Raha sainina ireo torolalana nomen'ny Fikambanana Erantany misahana ny Fahasalamàna, betsaka sahady ireo olompirenena no efa nampihatra ireo fepetra naroso toy ny fanasàna tànana sy ny fametrahana elanelana rehefa mifanerasera.
Marobe ireo hetsika nofoanana ho fisorohana ny mety ho fiparitahan'ilay viriosy, isan'izany ireo fankalazana ny Tobago Jazz Festival sy ny Point Fortin Borough Day, ary ireo fetibe ara-pivavahana toy ny Phagwa sy ny Spiritual Baptist Liberation Day. Ao anatin'ny nosy rahavavy Tobago, izay tsy mbola nisy tranga voamarina momba ilay viriosy, dia nofoanana ihany koa ilay hetsika malaza indrindra Goat and Crab Racing (hazakazaka osy sy foza), fanao rehefa Paska.
Fironana ao amin'ny faritra io amin'izao fotoana izao, miaraka amin'i St. Lucia nanafoana ny fetiben'ny Jazz fanaony isantaona na eo aza ireo dolara marobe azony avy amin'ireo mpizahatany voasarik'izany, ary i Jamaika nanemotra ny fankalazany ny Fetibeny ho amin'ny Oktobra 2020 — izay fanao mahazatra rehefa Aprily.
Ao Trinidad sy Tobago, anefa, mbola nisy ihany ny fotoana nahafahana nihomehy, na dia tao anatin'ny ahiahy aza. Tsy misy ifandraisany amin'ny fisian'ireo kisary hatsikana mivezivezy mameno ny media sôsialy, nisy vazivazy nataon'ny Wired868, ilay tranonkala mpamadika ny vaovao ho hatsikana, momba ireo laharampahamehana napetraky ny Trinbagoniàna tamin'ny fihanihaniana mikasika ireo fomba mety hahafahan-dry zareo “miatrika amim-pahatoniana ity raharaha ity mba hankanesana any amin'ny Fetibe 2021 tetsy ankilany”.
Ndeha hialantsika ireo vazivazy rehetra, fa na izany aza, toy ny ampahany betsaka aty Karaiba, ny firenena dia miomana fatratra amin'izay ho fiantraikan'ny COVID-19, na amin'ny resaka maha-olona io na toekarena. Ny filohan'ny tokon-draharaha ao Tobago misahana ny Tranoben'ny Indostria sy ny Varotra ao Trinidad sy Tobago, Diane Hadad, dia nangataka tamin'ny praiministra mba hitsidika ny nosy hiresaka ny mety ho vesatry ny fiantraikan'ilay viriosy amin'ny toekaren'i Tobago, izay mbola mifofotra fatratra ny hiverina hanatratra ny fitoviana taorian'ny fikorontanana nahery vaika sy naharitra nateraky ny fahatapahan'ny tolotra fitaterana an-tsambo nisy teo amin'ireo nosy nandritra ny taona roa lasa izay.
Ny minisitry ny fahasalamàna, Terrence Deyalsingh, dia nampitaha ny toedraharaha misy amin'izao fotoana izao amin'ny fandehanana ambony tariby iray nohenjanina — tamin'ny fiezahana mitazona ny toekarena tsy hikatso no sady mandray “izay fepetra ara-pahasalamana rehetra ilaina, mifanaraka amin'ny tokony ho izy” — nefa nanitrikitrika ihany fa efa niomana araka izay tratra ireo tomponandraikitry ny fahasalamàna mba hiatrehana ny fahatongavan'ny COVID-19.
Ny 13 Martsa, tamin'ny 7:44 hariva UTC-04:00, ny ministeran'ny fahasalamàna dia nanamafy ny fisian'ny tranga iray faharoa, lehilahy iray 66 taona nandeha nivahiny nandritra ny tapabolana latsaka ary namonjy toeram-pitsaboana ny 12 Martsa teo mba hangataka fikarakaràna ara-pitsaboana. Natokana toerana izy nanomboka teo, ary ny mpitsabo lehibe ao amin'ny distrika misy azy dia nanomboka nitady ireo olona rehetra izay nifaneraseran'ity marary ity mba hanokanana toerana azy ireny.